Home > Tapakila fiarandalamby Trenitalia mora ary vidiny fitsangatsanganana
Eto ianao no afaka mahita ny fampahalalana rehetra momba Tapakila fiaran-dalamby Trenitalia ary Vidin'ny dia fitsangantsanganana ary tombony.
Ny lalan'ny fiaran-dalamby iraisam-pirenena dia eo anelanelan'i Geneva sy Milan ary ilaina izany 4 ora ao anaty Trenitalia.
The fiaran-dalamby dia mandeha amin'ny 3oo km isan'ora amin'ny lalan'ny lamasinina hafainganam-pandeha.
Number 1: Soraty mialoha araka izay azonao atao ny tapakilan'ny Trenitalia
Number 2: Fitsangatsanganana an-trano Trenitalia amin'ny fotoana fohy
Number 3: Alefaso ny tapakilan'ny Trenitalia rehefa azonao antoka ny fandaharam-potoananao
Ny serivisy entin-tsofina amin'ny trenitalia dia tena ilaina. Trenitalia Base train ticket can be exchanged and modified without limitation and Economy Standard ticket can only be modified once before the train departure date. You cannot exchange or refund the other Trenitalia tickets, fa misy ny forum amin'ny Internet azonao amidy amin'ny tapakilanao ny tapakilan'ny Trenitalia. Tehirizo ny torolàlana momba ny lamasinina Fitsangatsanganana trenitalia dia ny boky rehefa azo antoka fa ny fandaharam-potoananao.
Number 4: Vidio ny tapakilan'ny Trenitalia amin'ny Save A Train
Ny vidin'ny tapakila Trenitalia ohatra dia afaka manomboka amin'ny € 21 amin'ny fotoana fampiroboroboana nefa mety hahatratra € 97 amin'ny minitra farany. Vidiny tapakila tapakila miankina amin'ny kilasy nofidinao ary indreto ny latabatra famintinana ny vidin'ny salan'isa amin'ny kilasy ho an'ny Rome-Naples / Roma – Milan / Milan – Florence fiaran-dalamby:
1) Ny tombony amin'ny fiaran-dalamby Trenitalia dia manomboka amin'ny fahafahanao miainga sy tonga mivantana any afovoan-tanàna amin'izay tanàna andehanananao.. Azo antoka fa zavatra tsy manam-paharoa amin'ny lamasinina ity, indrindra raha mampiofana fitsangatsanganana avy any Roma ianao, Milan, Florence, Geneva, na Monaco, tombony lehibe ho an'ny Trenitalia izany. Noho io zava-misy io dia mivantana mankany afovoan-tanàna ny dia, manalavitra ny fitohanan'ny lozam-pifamoivoizana ianao ary tsy misy zavatra ratsy kokoa noho ny mijanona ao anaty fifamoivoizana amin'ny fialan-tsasatra.
Rehefa tonga amin'ny tapakilan'ny lamasinina Trenitalia pricing, matetika dia miovaova ny vidiny. Ny fampiroboroboana sasany dia ahafahanao mahazo tapakila fiaran-dalamby mora, fa mandritra ny andro farany alohan'ny hialana, mihabe ny vidiny ka raha tianao ny mandehandeha mandehandeha, Trenitalia ho anao!
2) Ny fitsangatsanganana fiaramanidina dia misy ny filaminan'ny fiarovana fiaramanidina. Midika izany fa tsy maintsy farafaharatsiny ianao 2 ora alohan'ny hialanao amin'ny fotoana voatondro. Miaraka amin'ny Trenitalia, mila tonga marina ianao 30 minitra mialoha. koa, mila miverina eny amin'ny seranam-piaramanidina avy ao afovoan-tanàna ianao. Noho izany, raha toa ka manisa ny fotoana dia, Trenitalia dia mandresy hatrany amin'ny ora fitsangatsanganana rehetra ary koa amin'ny vidiny raha ataonao ny volanao tahaka ny vola.
Inona no tsy mampitovy ireo ny toekarena fenitra, Premium, Business, ary Mpanatanteraka amin'ny Trenitalia?
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny kilasy tapakila fiaran-dalamby ao Trenitalia dia ny tsy fetezan'ny fanovana tapakila, vidin'ny, ary serivisy. Ankoatr'izay ny tapakila fiaran-dalamby Economy mahazatra no fomba mora indrindra sy malefaka indrindra handehanana any Italia.
Ny Trenitalia Tapakila fiaran-dalamby ara-toekarena mahazatra no mora indrindra amin'ny saran-dalan'ny Trenitalia rehetra. Tsara indrindra raha hamaky mialoha io tapakilan'ny lamasinina io mialoha, satria tapakila ambany ny vidiny ambany – amidy haingana izy ireo. Ireo mpandeha mitana tapakila fiarandalamby dia afaka maka valizy mifanaraka amin'ny banga, maimaim-poana ary afaka manafoana ny tapakilan'ny fiaran-dalamby alohan'ny fiaingany ary mahazo tamberim-bola (fihenan'ny fihenan'ny 20%).
Ho fanampin'ny tombony amin'ny tapakila fiaran-dalamby mahazatra, Ny tapakilan'ny Trenitalia Economy Premium dia manome seza tsara kokoa miaraka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny sy seza hafa mandritra ny dia lavitra. Ambonin'izany rehetra izany, misy ny menus sakafo telo azonao isafidianana ary sakafo kely sy zava-pisotro no homena anao eny amin'ny seza misy anao eo ambonin'ny lamasinina Trenitalia.
The Tapakila Business Trenitalia ny mpividy dia afaka mankafy ny tombony rehetra nosoratanay tetsy ambony ihany, ny mpandeha ao amin'ny Trenitalia Business Premier dia mahazo tombony amin'ny harona harona maro, seza seza ergonomika malefaka, efitrano malalaka, menus sakafo telo tokony hofidina. Ankoatr'izay dia manana rindrina ho an'ny tsiambaratelo sy faritra mangina ao amin'ny faritra voatondro ho an'ny orinasa amin'ny lamasinina Trenitalia ianao.
The Tapakila Executive Trenitalia Ireo mpividy dia afaka mankafy ny tombony rehetra voalaza etsy ambony, ankoatry ny seza hoditra ergonomika mihoa-pampana mba hametrahana ny lohany ary hankafizany ny fahitana any Italia..
Misy takelaka Trenitaliation?
Ny Pass no mankany Italia, fa ny safidy mora vidy ihany no hanoroana azy ireo raha toa ianao ka mikasa hanao fiaran-dalamby 14 andro, ny famandrihana dia ahafahana mamantatra an'i Italia amin'ny fiaran-dalamby miaraka amin'ny pasina manokana. Misy 3 misy ambaratonga azo: Tsotra, fampiononana, ary Mpanatanteraka ary azonao atao ny misafidy ny isan'ny dia 3 ny 10 ary misafidiana ny karazana fiaran-dalamby avy amin'ny Frecce haingam-pandeha mankany amin'ny intercity sy EuroCity.
Trenitalia manarona an'i Italia rehetra, na izany aza ny tobim-pirenena lehibe dia: Milan, Roma, Venice, Naples, Turin, Bologna, Geneva, Florence, ary Verona. Misy 11 onjam-peo iraisam-pirenena: 5 Trenitalia fiaran-dalamby any Switzerland ary 6 gara any Frantsa ary vitsy hafa any Austria sy Alemana ary Kroasia. Mazava ho azy fa afaka mandeha am-pitoniana sy haingana ianao amin'ny alàlan'ny eropeana tsara tarehy ary mankafy ny fomba fijery italiana nefa tsy misy zavatra very!
Renivohitra Naples atsinanana mankany amin'ny tanàna taloha. Raha mikasa hanao vitsivitsy ianao fitsangatsanganana an-andro avy any Naples amin'ny Pompeii na Sorrento, dia hijanona eo amin'ny garan-dalamby Naples ianao amin'ny fitsangatsanganana lamasinina.
Zava-dehibe toy izany koa ny mitondra ny tenanao mankany amin'ny Trenitalia dia ilaina. Eo amboniny dia ho azonao antoka ny manana ny antontan-taratasy fitsangatsanganana Trenitalia amin'ny telefaona na anaovana pirinty ary ny pasipaoro manan-kery dia tsy maintsy misy tsara foana raha manana fiantohana fitsangatsanganana.
Ny lamasinina ao amin'ny Trenitalia dia manana toeram-pisotroana kafe amin'ny lamasinina voatokana ho an'ny zava-pisotro sy sakafo maivana. Ahitana ny sandwich ny menu, sôkôla sôkôla, snacks, sôkôla sôkôla, kafe, sokola mafana, sy dite ary afaka mihinana sy misotro amin'ireto fiaran-dalamby ity ianao na haka izay novidinao niverina tamin'ny seza. Raha mandeha amin'ny Business ianao, Premium, na Kilasy voalohany azonao atao ny misafidy fisotroana tongasoa maimaimpoana amin'ny safidy iray 9 misy zava-pisotro misy rano mamy, hanim-py, or a gluten-free snack. On all Trenitalia trains, misy lavaka mandeha akaikin'ny seza misy anao.
Rehefa mividy ny tapakilan'ny Trenitalia ianao mialoha, afaka mankafy ianao Internet maimaim-poana amin'ny Internet on all Trenitalia frecciarossa type trains and classes.
Raha fintinina, raha tonga hatreto ianao, fantatrao izay rehetra ilainao momba ny fiaran-dalamby Trenitalia ary vonona hividy ny tapakilan'ny fiarandalamby Trenitalia SaveATrain.com.
Te hampidirina amn'ny tranokalanao ity pejy ity? kitiho eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-trenitalia%2F%0A - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code), Na azonao atao rohy mivantana ao amin'ity pejy ity.
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml ary afaka manova ny / it ho / nl na / fr sy fiteny maro kokoa.